सल्यान प्रहरी प्रमुख विकले पत्रकार सामु के भने ? « Tulsipur Khabar
सल्यान प्रहरी प्रमुख विकले पत्रकार सामु के भने ?
हिमाल शर्मा,सल्यान १८ भदौ । शान्ती सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम राख्नका लागी पत्रकार र संचारमाध्यमको महत्वपुर्ण भुमिका रहने सल्यानका प्रहरी प्रमुख भरत बहादुर विकले बताउनु भएको छ । भर्खरै सरुवा भई सल्यान आउनु भएका प्रहरी प्रमुख भरतबहादुर विकले शनिवार जिल्लाका पत्रकार संग गरिएको भेटघाट कार्यक्रममा सो कुरा बताउनु भएको हो ।
उहाले जिल्लामा शान्ती सुव्यवस्था कायम राख्नका लागी पत्रकार हरु संगको सहकार्यले धरेरै हद सम्म भुमिका खेल्ने बताउनु भयो । साथै आगामी दिनमा आफुले काम गर्दा पत्रकारहरुको पनि रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्नु भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विशेष गरी शान्ती र सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले निकै सावधानी पुर्वक काम गर्नु पर्ने भएकाले समन्वय र सहकार्य गरेर अगाढी बढ्न पत्रकारलाई आग्रह गर्नु भयो ।
सुचनाको महत्व सबै भन्दा ठुलो भएकाले सुचना आदान प्रदानमा विशेष ख्याल पुर्याउनु पर्ने भन्दै कतिपय घटनाहरुको अनुसन्धानका क्रममा केही समय लाग्ने भएकाले पत्रकारहरुले खोजेका जानकारी तत्काल दिन नसकिने समेत उहाले बताउनु भएको थियो ।
जिल्लाका पत्रकारहरुले प्रहरी प्रमुख विकलाई कार्य सफलताको शुभकामना दिएका थिए । उनीहरुले आगामी दिनमा जिल्लामा हने अपराधिक कृयाकलाप न्युनिकरणमा प्रहरी संग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने बताएका थिए ।